Uyenza njani isiphumo se "Andy Warhol" Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyilo lubandakanya ukuthanda ukwazi okuninzi, Oko kukuthi, uninzi lwabantu abagqiba ekubeni bangene kulo msebenzi zihlala zitsala umphumo othile, ethi, kwiimeko ezininzi, ithande ukubangela inani elikhulu leengcali zoyilo.
Nangona kunjalo, oku akuwakhupheli ngaphandle la matyala apho uyilo lwegraphic lwaluya kufundiswa ngesiseko sezona zikhokelo zemfundo zinokwenzeka, kwaye ubukhulu becala, uninzi abayili bemifanekiso Ngebangene kulo uqeqesho ngokulandela iitutorials kunye neencwadana kwi-Intanethi.
Phakathi kwezindululo ezininzi esinokuzifumana, uyilo luhlala lunxulunyaniswa namaqela abophelelwe ziindlela ezithile ngokwazo ifashoni kunye nesimbo ibhekisa, ukuba ngumzekelo woku ubugcisa basezidolophini, Ukuqaqambisa ukwandiswa kweeleta kunye noyilo lweedolophu.
Singathetha malunga ngabapeyinti bedijithaliAbo basebenzisa izixhobo zokuyila ukwenza iimodeli kunye nemisebenzi yabo, umsebenzi ekufanele ukuba ube nomonde kunye nokuzimisela. Kodwa okokugqibela, uyilo luluqeqesho olonwabisayo zonke iintlobo zoqheliso, lubalaselisa zonke iintlobo yeenkcubeko kunye neendlela, iyenza ibe lelinye lawona makhondo abanzi ngokubhekisele kumbutho wayo.
Namhlanje sibonisa isifundo esiza kukuvumela ukuba wenze ifayile ye "Andy Warhol" isiphumoNanga amanyathelo okuyila:
Ekuqaleni, sikhetha umfanekiso esifuna ukuwusebenzisa malunga nefuthe lethu.
Emva koko sisebenzisa isixhobo sokubhala kwaye sikhuphe imvelaphi.
Ngoku ukuba sinomfanekiso ngaphandle kwemvelaphi, siya kumfanekiso-Threshold kwaye sihambise imouse de sifumane iziphumo esizithandayo. Kufanelekile ukukwazisa ukuba Xabiso le127 inokuba yindawo elungileyo ekubhekiswa kuyo.
Siphinda kabini umaleko nge ukusebenza nakwithonjana elibonisa umfanekiso, apho kwiipaneli zomaleko siya kucinezela i-CTRL.
Ngesixhobo ipeyinti emele, sinokupeyinta lonke ukhetho ukuze lube mhlophe.
Emva koko sifaka icebo lokucoca ulwelo, Esithi ke siqhubeke neMenyu- Icebo lokucoca ulwelo-lobuGcisa.
Sitshintsha umaleko ube mnyama.
Ngoku kufuneka sifake umbala emsebenzini wethu kwaye oku, Cofa kwi-thumbnail yomaleko Ngelixa sibambe isitshixo seCtrl, esenziwa ngenjongo yokufumana kwakhona ukhetho ebesinokulwenza ngaphambili.
Senza uluhlu olutsha lweMenyu - uLuhlu - iNtsha- uLwaleko. Sibeka ezantsi koqobo, ze kamva khetha umbala esiwuthandayo. Ngesixhobo sebhokisi yokupeyinta siza kugcwalisa umaleko omtsha.
Ukuba sifuna ukwenza isitayile seWarhol, Kuya kwanela ukuphinda le nkqubo ngeminye imibala, oko ke kuvelisa isiphumo esifunekayo.
Kunganzima ukufikelela kuyo, nangona kunjalo, inkqubo iya kuba lula njengoko sihlala siziqhelanisa, ukusukela Isiphumo se-warhol Akunzima njengoko kubonakala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Uyenza njani isiphumo se "Andy Warhol"